Maraykanka oo ciidammadiisii kala baxay Somalia | Berberanews.com
Home WARARKA Maraykanka oo ciidammadiisii kala baxay Somalia
MUQDISHO-(Berberanews)-Taliska militariga Maraykanka ee qaaradda Afrika (AFRICOM) ayaa xaqiijiyey in la dhammaystiray bixitaankii ciidamada Maraykanka ee Somaliya.
Karns waxa uu sheegay in tiro aad u kooban oo ciidamada Maraykanka ah ay ku hadheen Soomaaliya.
Waxa uu sidoo kale sheegay in sababo dhinaca hawlgallada socda ah darteed aanay xilligan sheegaynin waddamada la geeyey ciidamada laga qaaday Soomaaliya.
Waxa uu sheegay Gaashaanle Sare Karns in haatan hawgalkoodu galay wejiga xiga oo ah inay wada-shaqayn xilliyo leh la sameeyaan ciidamada Soomaaliya. Waxa uu ku hanjabay in Maraykaku ay sii wadi doonaan cadaadista ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
Tirada ciidamada Maraykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegaa inta u dhaxaysa 650-800, kuwaasi oo Soomaaliya u joogay inay tababaraan islamarkaana caawiyaan ciidamada Somalia, gaar ahaan ciidanka Danab.
Ciidamada maraykanka ee Somalia
Previous articleSomaliland: Doonyo kalluumaysi oo ku degay Xeebta
Next articleNin mucaarida Moscow oo lagu xidhay Ruushka